Ugu yaraan 17 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 17 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
July 22, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Qarax hore oo ka dhacay Muqdisho. [Sawi Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay qarax ka dhacay Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ka dhacay bar-kantarool kuyaala jidka KM4, sida ilo-wareedyadu ay sheegeen.
In ka badan 20 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaas oo ay sheegatay masuuliyadiisa maleeshiyada Al-Shabaab, taasoo geysata qaraxyada Muqdisho.
Dadka dhintay ayaa waxaa kamid ahaa askar ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay iyo dad rayid ah.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa sheegay in go’aan ka gaarida goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay tahay mid u taala dowlada federaalka Soomaaliya balse [...]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Mutinous Somali forces demanding salary have captured major streets in the Somali capital, Mogadishu on Sunday, according to the residents. The forces were angered after the former President Hassan Sheikh’s government failed to [...]